Sida loo abuuro Muqaal ah oo la Dreamweaver CS3 / CS4 / CS5
> Resource > Talooyin > Sida loo sameeyo Muqaal ah ee Dreamweaver
Dreamweaver waa software aan jeclaa in xaalkaa HTML in labada design dheeraad ah ama hab code. Dhif Laakiin waxaan qor code-HTML sababtoo ah waa wax yar oo adag. Anigu ma waxaan ahay barnaamijyada ah. Haddii aad tahay oo kaliya ah naqshadeeye web celcelis ahaan aniga oo kale, oo aad jeclaan lahayd in this article, oo wuxuu idin ​​tusin sida loo sameeyo slideshow ah ee Dreamweaver aan sireed. Waxay dabooli doontaa versions Dreamweaver CS3 / CS4 / CS5.
In Dreamweaver CS3, waxaad samayn kartaa sameeyo slideshow aasaasiga ah - kaliya loop sawirada iyo libdhi saamaynta aan thumbnail oo gacanta ku - laakiin waxaa dhab ahaan waxa qof uu doonayo. Nasiib darro, waa la waayay ee Dreamweaver CS4 iyo CS5 - Dreamweaver CS5 abuuri karaa slideshow aan flash? MAYA! Sidaas sida aad ku dari kartaa slideshow ah in bogagga Dreamweaver? Halkan waxaan ku soo bandhigi doonaa hab kuu ogolaanaya inaad si ay u sameeyaan slideshow ah webpage via Dreamweaver CS3 iyo Dreamweaver CS4 / CS5.
Qeybta 1: Samaynta iyo Muqaal ah ee Dreamweaver CS4 / CS5
Qeybta 2: Abuuridda iyo Muqaal ah ee Dreamweaver CS3
Si aad slideshow ah, Wondershare Flash Gallery Factory Deluxe waa waxtar. Waxay bixisaa 2D il-qabad ama arrimo slideshow 3D oo ha aad si fudud oo dhaqso loo abuuro slideshow Dreamweaver ah socon isticmaalaya sawiro iyo videos oo dhigay heeso aad jeceshahay sida music asalka. Waa maxay dheeraad ah, waxaa intaasi dheer oo uu bixiyaa code html ah slideshow ah. Waxaad isticmaali kartaa driectly in Dreamweaver. Halkan waxa aad ka soo dejisan kartaa software this:
Copy iyo paste
Haddii aad doorato in ay daabacaan aad slideshow in Online Album ee Flash Gallery Factory, si fudud nuqul oo paste code bogga ku Dreamweaver. Taasi waa. Waxa kale oo aad paste yaabaa xeerka ku qoran boggaga internetka ee kuu ogolaanaysa inaad xaalkaa code HTML si aad ula wadaagto slideshow. Xaaladaha in aad daabici aad slideshow in computer, waa in aad nuqul ka faylasha kaabayaal ah oo ay ku jirto * .swf, * .jpg, * .xml iyo folder khayraadka meel iyo yeelaan jid sax ah. Marka daabacaan bogagga internetka ka dib saxar in Dreamweaver, ha xasuuso inaad geliyaan files kuwaas oo si aad website fog, sidoo kale. Xaaladaha in aad daabici aad slideshow in computer, waa in aad nuqul ka faylasha kaabayaal ah oo ay ku jirto * .swf, * .jpg, * .xml iyo folder khayraadka meel iyo yeelaan jid sax ah. Marka daabacaan bogagga internetka ka dib saxar in Dreamweaver, ha xasuuso inaad geliyaan files kuwaas oo si aad website fog, sidoo kale.
Dreamweaver CS 3 ka mid ah taageero toos ah ku darto slideshow fudud bogga internetka, si kastaba ha ahaatee, habkaani ayaa laga saaray Dreamweaver CS4 iyo CS5, bedelay Widget ah oo lacag la'aan ah ama gadashada. Laakiin haddii aad weli isticmaalaya Dreamweaver CS3, dareemaan nasiib raac tallaabooyinkan fudud si ay u abuuraan slideshow ah ee Dreamweaver .
1. U dhaqaaq dulqabo meeshii aad rabto in aad is geliso slideshow ah oo la xusho Insert > Media > Image siladda .
2. badbaadi element in ay folder aad page (talinayaa). In ka Save Flash Cunsurka sanduuqa wada hadal, qor magaca iyo guji Save.
3. element placeholder Flash la galin doonaa in aad page iyo kormeeraha Tag furmo si xaq.
4. Dooro placeholder Flash element oo u furan Tag Isbatooraha (ama Windows Tag Isbatooraha)
5. Riix meesha bannaan oo ayan u dhimaya ee imageURLs, ka dibna riix "Edit Qiimayaasha Array" icon (waa dhamaadka khadka).
6. In pop-up ee Edit imageURLs sanduuqa Array wada hadal, riix badhanka Plus ah (+) in lagu daro images, guji laga jaray ee (-) badhanka si meesha looga saaro placeholder element.
7. Click OK in ay xirto sanduuqa wada hadal. Sidoo kale, waxaad isticmaali kartaa kormeere Tag ah in koobin kale.
8. Iyadoo Image ka ​​siladda soo xulay, riix Play button inay ku eegaan siladda Image ah. Isticmaal badhannada si loo xakameeyo daawadayaasha.
Xadaynta waa wax iska cad in la sameeyo slideshow ah ee Dreamweaver: slideshow photo fudud oo kaliya libdhi saamaynta oo aan thumbnails oo gacanta ku. Haddii aad rabto in aad slideshow ah oo khibrad leh, Flash Gallery Factory waa xaqiiqo ah waxa aad doonayso - waa xal dhameystiran si ay u sameeyaan dhammaan noocyada kala duwan ee slideshow internetka, sawir gallery iyo banner image ee Flash - sireed lahayn, ma Flash iyo xirfad HTML!
Download iyo rakib Microsoft .net
Dhalashada sawrirrada Fikradaha - Samee Dhalashada Photo Scrapbooks